Molekiolan'ny tanora NAD +: coenzyme manan-danja amin'ny fahasalaman'ny olombelona-Shangke Chemical
Molecule tanora NAD +: Coenzyme izay mametraka andraikitra manan-danja amin'ny fahasalaman'ny olombelona
Rena hatramin'izay Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) na "Loharanon'ny Tanora"? ” Amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy fanazaran-tena mety, ny vatanao dia amboarina amin'ny mahazatra mba hisian'ny metabolism faran'izay tsara.
Mampalahelo fa miaraka amin'ny aretina, ny fahanterana sy / na ny fomba tsy mahasalama, ny vatanao dia manomboka miaina tsy fahampiana maro samihafa izay mahita ny fahombiazan'ny fahombiazana. Anisan'ireo tsy fahampiana ireo ny haavon'ny adoline adenine dinucleotide (NAD +) ambany ny nikotinamide. NAD + fanampiny dia tonga mora ampiasaina hanakaiky ny elanelana tsy fahampiana, indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fahanterana ara-pahasalamana.
Nikotinamide adenine dinucleotide (NAD) dia manondro lozigène miaraka amin'ny adenine roa ary nicotinamide. Ny sela velona rehetra dia misy io sôkôlà simika io, izay avy amin'ny Nicotinamide Riboside. Ny haavon'ny NAD ao amin'ny vatan'olombelona iray dia misy heriny amin'ny fahanterana.
Misy karazany roa amin'ny NAD, dia ny: nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) sy ny nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) + hydrogen (H) (NADH). Ny teo dia misy electrons roa fanampiny, ary izay no mampiavaka azy farany.
Inona ny atao hoe NAD +?
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) dia nucleotide pyridine izay misy ankehitriny sy tena zava-dehibe amin'ny sela velona rehetra. Ity nucleotide pyridine ity dia manampy ny fizotran'ny biolojika izay iasan'ny cofactor lehibe ary koa ny substrate. Ireo dingana ireo dia ahitana ny famokarana angovo, fikolokoloana ny ADN mahasalama ary fanamboarana, immunoregulation sy ny fanehoana ny fototarazo. Izany dia manazava ny hery famerenana famantarana ny NAD +.
Ny NAD + dia manana anjara toerana lehibe amin'ny famantarana ny mpitondra hafatra faharoa ary koa ny fiasa immunoregulatory.
Toy ny molekiola tanora, NAD + dia fantatra fa singa manan-danja amin'ny fizotran'ny fahanterana. Ny fandinihana samihafa dia nanohana ny toerany fa ny haavon'ny NAD + ao amin'ny vatan'olombelona dia manana fifamatorana mivantana amin'ny fahatanoran'ny olona iray. Ny avo kokoa ny haavon'ny NAD +, ny tanora kokoa ny sela vatana, ny tahiry ary ny fijerin'ny vatana manontolo. Io no fototry ny fahabe malaza amin'ny famerenan'ny NAD +.
Amin'ny lafiny iray, ny tsy fahampian'ny NAD + dia mety hiteraka harerahana sy aretina maro. Raha izany, ny haavon'ny NAD + dia tsy isalasalana fa manan-danja tokoa ho an'ny fahasalaman'ny olona iray.
Ahoana ny fiasan'ny NAD +?
Rehefa tsy mahavita ny angovo mahasalama sy ny famokarana hormonina mahasalama ny vatanao dia manomboka manambara olana ara-pahasalamana isan-karazany toy ny fihenan'ny fahamaizinana, olana fahatsiarovana ary fihenan'ny fisainana. Izany dia satria tsy ampy ny haavon'ny NAD + sy NADH hanohanana ny fahaterahana ara-dalàna sy ny fiasan'ny sela vatana.
Indrindra indrindra, ny fanalahidy NAD + function dia ny fanohanana ny valin-tenin'ny metabola amin'ny vatana, amin'ny alàlan'ny famindrana ny fandehanana elektronika avy amina molekiola mankany amin'ny iray hafa, amin'ny alàlan'ny fizahana fantatra amin'ny anarana hoe redox. Amin'ny alàlan'ny fihetseham-po redox dia afaka manafaka ny angovo voatahiry ao amin'ny fatoran'ny oksizenina roa malemy kokoa.
Raha ny mahazatra, ny selao amin'ny vatanao dia mila angovo avy amin'ny lalan-dra mba hanomezana hery azy ireo hanatanteraka asa metabolika isan-karazany. Indrindra indrindra ny angovo ilain'izy ireo dia voatahiry ho asidra matavy sy glucose. Noho izany, ny anjara toerana voalohany amin'ny angovo NAD + eto dia ny fanamorana ny fitaterana ny loharanom-angovo manomboka any amin'ny rà mankany amin'ny sela mifandraika.
Rehefa mamoaka angovo ny asidra matavy sy glukosa dia manamora ny fitaterana angovo ho an'ny mitochondria ny famokarana ny angovo ho an'ny miochondria. Raha tsy izany, raha misy ny tsy fahampian'ny NAD +, ny fifindran'ny angovo ao amin'ny sela dia mikorontana, ary io no mahatonga ny mitochondrial dysfunction, izay manafaingana ny fizotran'ny fahanterana.
Isaky ny NADH dia afaka mamokatra molekiola ATP telo ny NAD +. Vokatry ny fanamafisam-po ny sela, dia mihamahery vaika ianao, ara-tsaina sy ara-batana, satria ny NAD + dia nanentana ny fizotran'ny biolojika nifandraisan'ny fahanterana.
Ny asan'ny NAD + lehibe dia misy ny fampahavitrihana ny angovo izay mihetsika amin'ny redox ny vatana. Ireo angovo ireo dia antsoina hoe oxidoreductases. Izy ireo dia ahitana ny enzymes Sirtuin (SIRT), polymerase poly-ADP-ribose ary cyclic ADP ribose hydrolase (CD38).
Ny fanamafisana ny fampahavoana Sirtuin dia tsara ny manamarika fa ny fiasan'ny andiam-pahalemana sirtuin dia ny famonoana ireo fototarazo izay manamora ny fahanterana. Ny fototarazo dia ahitana ireo izay mandray anjara amin'ny synthesis sy fitehirizana tavy, fihanahana ary ny fifehezana siramamy amin'ny ra. Mba hahazoana anzima sirtuin hahatratrarana an'izany, dia mitaky ny fiadiany NAD + izy ireo satria ireo molekiola NAD ireo dia manampy azy ireo hanangona vondrona acetyl avy amin'ny proteinina ho fanovana.
Noho izany, ny fitomboan'ny haavo NAD + dia mandika ho amin'ny mari-pahaizana mahery vaika kokoa. Izany dia miteraka fitetezana mitochondrial mitombo ary koa ny fahatsapana ny insuline.
Ny fiantraikan'ny fanatsarana metabolisma toy izany dia mitarika ny fiverenan'ny vokatry ny fotoana nandrosoan'ny atidoha, noho ny hery manafoana ny fahanterana NAD +. Ary koa, ny fahatsapana ny insuline fanatsarana dia manampy ny vatanao hihazona ny haavon'ny siramamy amin'ny ra. Vokatr'izany, ny selao amin'ny vatanao dia toa tanora kokoa ary mitondra tena amin'ny endrika tanora kokoa, ka manome endrika endrika tanora kokoa anao ihany koa.
Ho fanampin'izany, ny NAD + dia fantatra fa molekolika manana andraikitra lehibe amin'ny famantarana famantarana extracellular, izay fototry ny fifandraisana an-sela. Ary koa, miasa ho toy ny neurotransmitter vaovao izy, mampita ny fampahalalana avy amin'ny nerve ho amin'ny selam-pandefasana sela hozatra.
Ny tombony / asan'ny NAD +
Betsaka ireo Tombony NAD + ary asa izay misy:
1.Protection avy amin'ny toe-javatra iainana
Ny tombotsoan'ny anti-fahanterana NAD + dia anisan'ireo antony lehibe mahatonga ny olona ho salama amin'ny fahasalamana hahita ny fahasalamany amin'ny sehatry ny NAD +. Rehefa mihalehibe ny olona, ​​mitombo ny fahasimban'ny ADN ary izany dia miteraka ny fihenan'ny haavon'ny NAD +, ny fihenan'ny hetsika SIRT1 ary ny fihenan'ny asa mitochondrial. Mitranga izany noho ny adin-tsaina amin'ny oxidative sela, izay amin'ny fitenin'ny olona dia midika fa tsy mandanjalanja ny antioxidantsan'ny vatana sy ny radical maimaim-poana.
Vokatr'izany, olona antitra dia mora kokoa amin'ny toe-pahasalamana isan-karazany toy ny atherosclerosis, aretina aretim-po, arthritis, katarakta, diabeta ary hypertension.
Soa ihany, fikarohana maro no maneho fa ny NAD + dia miaro ny adin-tsaina amin'ny oxidative amin'ny sela vatana. Noho izany, ny fihinanana sakafo NAD +, famatsiana na fampidirana fanelanelanana amin'ny fanatsarana ny ambaratonga hafa NAD + dia afaka manampy ny zokiolona, ​​indrindra ireo izay mihoatra ny 50 taona, mba hitazomana ny fahasalamana, na dia mitombo aza ny fijanonany amin'ny tany.
Manatsara ny fiasa ny NAD + ary manohana ny fitomboan'ny mitochondria. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fitandroana ny haavon'ireo ATP ao amin'ny sela izany, izay raha tsy izany dia efa nifanekena tamin'ny fahanterana efa antitra.
2. Famelomana enti-bidy
Araka ny efa voalaza teo aloha, ny NAD + dia manohana ny fahaizan'ny famokarana angovo amin'ny mitochondria amin'ny vatanao. Rehefa tsy mamokatra angovo ny mitochondria, ireo taova lehibe toy ny fo, ny ati-doha, ny hozatra ary ny havokavoka dia tsy mahavita manatanteraka tsara ary mitondra havizanana sy mihena ny antony manosika azy.
Amin'ny lafiny iray, rehefa manana haavon'ny NAD + ny vatanao, ireo taova ireto dia afaka manao ambaratonga salama ary vokatr'izany dia mahatsapa hery, manentana, miaina ary misy saina mazava kokoa. Mila sela coenzyme rehetra ny sela velona rehetra satria mamporisika ny famokarana adenosine triphosphate.
Ny sela dia mampiasa adenosine triphosphate hamokatra angovo ilain'ireo taova hafa aminao amin'ny asa notadiavina. Rehefa mihamitombo ny vatanao dia afaka miady amin'ny fahatsapana reraka amin'ny ankapobeny ny selao.
3.Nivoatra ny fiasan'ny atidoha
Ny harerahana dia mampihena ny fiasan'ny kognitifinao. Mahatonga anao hahatsapa ho toy ny volo malefaka na feno rahona ny sainao. Na izany aza dia efa hitanay fa nanolotra fanamaivanana havizanana ny NAD +. Noho izany, ny coenzyme dia mampitombo ny fiasan'ny atidohanao amin'ny alàlan'ny fametahana ny famokarana angovo ampy ho an'ny selan'ny atidohanao, ahafahany miady harerahana. Vokatr'izany dia lasa mailo kokoa ny sainao ary mihazona aina be hiatrehana ireo asa isan-karazany ilainy hieritreretana.
4.Mahatsara ny fanoherana ny fihenan'ny sela
Ao amin'ny fandinihana iray mikendry ny fametrahana ny fiantraikan'ny NAD + amin'ny fihenan-tsasatra amin'ny sela finday, ny mpikaroka dia nahita izany Fitsaboana NAD + nahatonga ny sela labera kokoa hiatrika kokoa ny adin-tsaina. Amin'ny lafiny iray, ireo sela izay tsy natolotra tamin'ny NAD + dia resin'ny fihenan'antoka amin'ny oxidative. Noho izany, midika izany fa io coenzyme io dia mampitombo ny habetsaky ny sela ao amin'ny vatanao, manampy ny vatanao hiady amin'ny zavamananaina miteraka aretina maro kokoa.
5.DNA fanamboarana mandritra ny fotoana maharitra kokoa
Amin'ny andro iainanao, miharihary amin'ny zavatra sy fepetra isan-karazany izay manimba ny ADN ianao. Ny ADN simba dia mampihena ny fiainanao. Na izany aza, miaraka amin'ny famatsiana NAD + ao amin'ny vatanao, ireo coenzyme ireo dia manamora ny fanamboarana ny fanamboarana simba amin'ny alàlan'ny fitaterana ireo elektronika mankany amin'ireo faritra misy ADN simba. Izany dia araka ny fandinihana maro izay tonga hatramin'ny fehin-kevitra fa ny famenoana ny NAD + dia manitatra ny androm-piainan'ny biby na olombelona iray.
6.Matory amin'ny torimaso sy fisakafoanana mahazatra
Hitan'ny mpikaroka isan-karazany fa ny NAD + dia manana fitaomana mahavariana amin'ny fihodinan'ny torimaso ataon'ny olona ary koa ny lamina mosary. Ny fotoana izay matory ara-batana sy fohazanao ary ny fivoaran'ny ankapobeny amin'ny andro mahazatra dia miankina amin'ny famoronan-tananao. Ary koa, ny famokarana hormonina hanoanana ao amin'ny vatanao dia misy fiantraikany betsaka amin'ny famokarana simika.
Fifandraisana mifanitsy eo amin'ny sirtuins sy Valiny NAD + amin'ny gadona fanaintainan'ny fo sy ny fahazotoana. Raha tsy izany, ny fanakorontanana ny NAD + na ny sirtika dia miteraka rhythm Circadian tsy mahasalama, koa tsy mihinana sy misakafo firy. Noho izany, NAD + dia miasa mora amin'ny torimaso mahasalama sy fihinanana sakafo mahasalama. Miaraka amin'ireo roa ireo eto amin'ny tarika dia ho mora aminao ny hahatratra sy hihazonana lanja ara-pahasalamana.
Amin'ny fanomezana ireo asa mahasoa rehetra etsy ambony dia tsy isalasalana fa ny NAD + dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanampiana ny olona hanana fiainana salama na amin'ny vanim-potoana itomboana aza.
Ny fampiharana / fampiasana ny NAD +
1.Mampitombo ny fahaizana sy ny fitadidiana fahatsiarovana
Betsaka ny olona mahalala fa manolotra voajanahary io singa io
famerenana sy fanatsarana ireo lalan-dalan'ny neural ao amin'ny atidoha.
Ankoatr'izany, dia manaisotra harerahana ara-tsaina sy ankapobeny, ka manatsara ny fahatsapana saina.
Vokatr'izany dia afaka mianatra sy mahatadidy kokoa ny fomba ampianarana azy.
2.Thicker fantsika sy volo
Ny fantsika sy ny volo amin'ny ankapobeny no hita mba hamaritana ny hakanton'ny olona iray, indrindra ny vehivavy. Noho ny fahafahany mampiroborobo ny fanamboarana ny simba simba, ny NAD + dia zava-dehibe amin'ny fantsika sy volo matevina. Raha toa ka izany dia tamboho simika be dia be tokoa ho an'ny olona manahy momba ny volo malefaka sy / na ny fantsika.
3.Ny fahasalaman'ny hoditra
Ny fahanterana eo amin'ny olona dia miaraka amin'ny hoditry ny hoditra toy ny kapitsina, tsipika tsara ary tsy miovaova. Na izany aza, ireo te-hanohitra ireo famantarana efa antitra dia maka ny suplement NAD +, izay mandeha tsara ho an'ny tanjona. The NAD + anti antitra tena tombony dia malaza.
4.Mampiasa fanatsarana ny asa
Rehefa mihalehibe ny olona dia lasa fohy kokoa ary malemy noho ny fihenan'ny hozatra izay misy amin'ny fahanterana. Na izany aza, ireo izay nahita ny herin'ny anti-antitra tamin'ny NAD + dia nanararaotra izany hanatsarana ny fiasan'ny hozatra.
5. fisorohana aretina mifandraika amin'ny taona
Ankoatr'izay, ireo olona manana famatsiana NAD + kely ao amin'ny vatany noho ny fahanterana dia mitady loharano ivelany avy amin'ny famokarana simika mba hampisondrotana ny tsy fahatomombanan'izy ireo. Ny famatsiana fanampiny amin'ny enzyme dia ahafahan'ny vatany hivoatra mafy amin'ny aretina isan-karazany mifandraika amin'ny fahanterana.
NAD + Dosage
Na dia mpiorina voajanahary aza ny NAD + dia tsy maintsy alaina amin'ny fahalalana onony. Araka ny filazan'ny masoivoho misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA), no tena voavonjy Dosie NAD + dia farafahakeliny grama roa isan'andro. Ny fotoam-pitsaboana natokana dia 7 ka hatramin'ny 16 andro, arakaraka ny tantaran'ny mpampiasa.
Ny vokatry ny fianjerana NAD + haavony
Zava-dehibe indrindra amin'ny tsirairay ny manome antoka fa ampy ny haavon'ny NAD +. mitombo
Ny haavon'ny NAD + dia ilaina amin'ny olona miaina ny tsy fahampian'ny NAD +. Izany dia satria ny tsy fahampian'ny NAD + dia misy fiantraikany maro tsy mendrika.
1. Famantarana famantarana
Amin'ny tanora iray, ny NAD + sy NADH dia be dia be raha oharina amin'ireo ambaratonga hita ao amin'ny olon-dehibe. Ny fampihenana ny haavon'ny NAD + amin'ny taona dia mitarika ny fihenan'ny hetsika SIRT1, ka manafaingana ny fisian'ireo famantarana ny fahanterana. Amin'izany tranga izany, ny fomba mahomby indrindra hanohitra na hanakana ireo famantarana ireo dia ny fampitomboana ny haavon'ny NAD + ao amin'ny vatana. Miaraka amin'ny fanamafisam-peo coenzyme dia hitarika hetsika SIRT1 bebe kokoa, noho izany dia fijery sy fahatsapana fanavaozana bebe kokoa.
Ny hypoxia dia fepetra iray aseho amin'ny famatsiana oksizenina ambany amin'ny vatan'olombelona. Ny toe-javatra dia mitarika ny haingam-pandeha NADH sy ambany NAD + ary miavaka amin'ny soritr'aretina toy ny fanapahana ny hoditra, fisavoritahana, fihenan-tsasatra miadana, fahasahiranana mifoka rivotra, mamofonga ary tsy mitsahatra ny kohaka.
Ny olona mijaly amin'ny hypoxia dia afaka mahazo fanamaivanana amin'ny soritr'aretina amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny haavony NAD +. Ireo izay tandindomin-doza ny fepetra dia mety hampihena ny fahatongavany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny haavon'ny NAD + ihany koa.
3. Sunburn sy ny fahasimban'ny hoditra
Matahotra ny fiposahan'ny masoandro na ny fahasimban'ny hoditra vokatry ny fiposahan'ny masoandro? NAD + ary NADH voasaronao. Samy manome ny fiarovana ny hoditra amin'ny masoandro sy ny homamiadan'ny hoditra amin'ny alàlan'ny fitrandrahana UVB sy UVA.
Raha mahatsapa harerahana miafina sy fahalemena amin'ny vatana amin'ny ankapobeny ianao dia mety hanana tahiry NAD + ambany, ka toy izany no mampihena ny hetsika SIRT1. Amin'ny tranga toa izany, ny famoahana NADH na NAD + dia afaka manamaivana ny soritr'aretin'ny harerahana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fiasa mitochondria.
Amin'ny alàlan'ny fampahavitrihana ny Sirtuins, ny NAD + dia manatsara ny fiasan'ny sela miteraka metabolisma mivantana. Toy ny hoe, ireo olona manana olana momba ny fitantanana ny lanjany noho ny metabolisma ratsy dia mety hahatratra ny lanjany lanja maniry amin'ny alàlan'ny NAD +. Mety ho vahaolana mahomby ho anao izany raha matahotra ny fahazoana lanja tsy mahasalama na ny kolesterola LDL avo lenta vokatry ny fepetra mampandefitra amin'ny metabolism.
6. Aretina amin'ny fo
Ny fiasan'ny NAD + ao amin'ny vatana dia mitaona ny hetsika mitochondria, izay tena ilaina amin'ny fampandehanana tsara ny fo. Ny tsy fahampian'ny pūmika simika dia manafaingana ny tsy fahombiazan'ny fo, zavatra izay tsy te hiaina akory. Ka raha manana haavo Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) ambany ianao, angamba noho ny ratra ischemia-reperfusion na aretina hafa, dia hahatsapa tsara ianao ary hihatsara ny fahasalamanao raha vao manamafy ny famoarana ny coenzyme ao amin'ny vatanao.
Mijaly amin'ny sclerose marobe? Raha eny, tokony handinika ny tombontsoa azo avy amin'ny vovoka NAD + ianao NAD + fanampiny fampidirana ho an'ny aretina manasitrana ny aretina.
Ny Sclerosis Multiple dia mamaritra ny haavo NAD + ao amin'ny hery fiarovana nefa ny rafi-pitatitra dia mahatsapa ny tsy fahampian'ny mitovy. Ny fametrahana NAD + dia hampihena ny tsy fahampian'ny vokatra simika amin'ny rafi-pitatitra, ka manatsara ny soritr'aretina MS.
8. Aretin-tsaina sy ny toe-tsaina neurodegenerative
Raha mahatsapa fahasalamana ara-tsaina ianao na toe-batana neurodegenerative toa ny aretina Alzheimer, aretina nataon'i Parkinson na fahatapahan-tena, dia afaka manampy anao hamerenana amin'ny laoniny ny fahasalamana NAD +. Ny anton'izany dia ny antony mahatonga izany Tsy fahampiana NAD +, mitarika ny fampihenana ny herin'ny atidohanao sy ny dopamine. Koa satria ny angovo sy ny dopamine dia singa manan-danja amin'ny rafi-tsaina sy ny rafi-pitondran-tena, dia hiharatsy ny soritr'aretinao raha tsy mahita fomba hampitomboana ny haavon'ny NAD + ianao.
Ahoana ny fampitomboana ny haavon'ny NAD + voajanahary?
1. Manao fanatanjahan-tena
Rehefa mihalehibe ianao dia ilaina amin'ny fahasalamanao ny fanazaran-tena. Miaraka amin'ny fanazaran-tena tsy tapaka, ny fahafahan'ny vatanao hamokatra NAD + dia manome hery. Mila angovo hanatanterahana ny fanatanjahan-tena ianao. Noho izany, arakaraka ny fanatanjahan-tena, ny vatanao dia miteraka angovo amin'ny famporisihana ny famokarana mitochondria bebe kokoa. Vokatr'izay dia mitombo ara-batana ny haavon'ny NAD + anao.
2. Fifadian-kanina tsy tapaka
Na dia atao toy ny fomba fanoloran-tena aza ny fifadian-kanina dia misy ihany koa ny tombony azo avy amin'ny fahasalamana samihafa, anisan'izany ny fampitomboana ny haavon'ny NAD + ary ny fampidirana SIRT1.
3.Mandratra ny tara-masoandro be loatra
Ny taratra ultraviolet avy amin'ny masoandro dia manafaingana ny fahanterana amin'ny hoditrao. Ny ratsy kokoa aza, ny fanararaotana tafahoatra amin'ny tara-masoandro dia manimba ny fivarotana izay mandray anjara amin'ny fanamboarana ireo sela vita amin'ny hoditra simba. Izany dia mitondra amin'ny fihenan'ny haavo NAD +. Raha izany, dia hisorohana ny tsy hitranga sy hanampy ny vatanao amin'ny fikojakojana ny fahasalamana NAD + amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fandehanana be loatra amin'ny tara-masoandro rehefa afaka manao izany ianao. Arovy koa ny tenanao amin'ny voka-dratsy manimba ny masoandro amin'ny fandrakofana ny masonao amin'ny sunscreen kalitao rehefa mivoaka amin'ny andro mafana ianao.
4. Handray ny famoahana NAD +
Na dia ny sakafo ara-pahasalamana voalanjalanja mahasalama aza no fihemoran'ny famatsiana NAD + tsara indrindra amin'ny vatantsika, indraindray misy zavatra mbola tokony hatao. Indrindra fa ny olona 50 taona dia mitaky NAD + bebe kokoa noho izay omen'ny sakafo voalanjalanja mahazatra. Amin'ity tranga ity dia misy fanafody fampidirina NAD-infires. Ireo famatsiana ireo dia tonga amin'ny endrika kapisasera ary mora hita. Izy ireo dia ahitana vitaminina B3 (nicotinamide riboside) izay navadika ho NAD + ao amin'ny vatana.
5. Matory ampy
Ny fahazoana torimaso ampy isan'andro dia fomba voajanahary hanamafisana ny haavon'ny sisan-javatra simika anti-antitra. Ny fitsaharana tsara amin'ny torimaso dia mamporisika ny famokarana motera biolojika ao amin'ny vatanao.
6. Fandraisana sakafo NAD +
Hitan'ny mpikaroka fa nikotinamide riboside, endrika endrika vitamin B3, dia mivadika ho NAD + ao amin'ny vatana. Ny coenzymes, sahala amin'ny NAD + namboarina avy amin'ny vatana, dia ampiasaina amin'ny dingana metabolika isan-karazany ka mahatonga ny fahaleovantena na ny fiverenana amin'ny fahanterana eo amin'ny vatan'olombelona. Raha izany, ny sakafo misy io vitaminina (NAD + sakafo) io dia afaka manome supplementing NAD + lehibe.
Sakafo izay misy ny ribôpine nikotinamide, izay azonao ianteherana hanatsarana ny haavon'ny NAD + ara-dalàna:
Ronono ronono: Ny fikarohana dia mampiseho fa isaky ny litatra ny ronono omby dia 9 μmol ny NAD +.
Trondro: manan-trondro vitsivitsy toy ny tuna sy salmon no manankarena ao amin'ny NAD +. Ny votoatin'ny NAD + amin'ny kaopy iray amin'ny kaopy dia mirefy 20.5mg ary 10.1mg ho an'ny salmon.
Ny holatra Crimini: Raha maka sotrokely amin'ny Crimini Mushroom ianao dia nanolotra ny vatanao tamin'ny 3.3mg ny NAD +.
Henan'akoho: na voahosotra, roan-maditra na voaendy, dia amina hena iray avy amin'ny henan'akoho dia hanome anao 9.1mg amin'ny NAD +.
Sakafo masirasira: Ny yeast dia loharano manankarena NAD + manankarena raha oharina amin'ny ronono ronono. Noho izany, ny sakafo masirasira toy ny mofo sy ny mofo dia afaka mandray anjara amin'ny famerenana ny haavon'ny NAD + ao amin'ny vatanao. Na dia azo atao loharanom-baovao aza ny labiera dia tokony hokarakaraina amin'ny fahalalana onony.
Maitso maitso: Ny legioma maitso sasany ihany koa Sakafo NAD + , indrindra ny voanjo ary asparagus, dia manankarena amin'ny famokarana akora simika mampiroborobo ny tanora NAD +. Misy kaopy voangam-bary dia 3.2mg ny NAD + raha ny kapoakan'ny asparagus kosa manana 2mg ny fakana.
Fanamafisana ny sakafo ketogen: Ny fisakafoana amin'ny keto dia midika fa mametra ny tenanao amin'ny sakafo matavy nefa ambany-carb. Rehefa manaiky an'io sakafo io ianao, ny vatanao dia miditra ao amin'ny fanjakana fantatra amin'ny hoe ketosis izay mampiasa tavy fa tsy glucose ho an'ny angovo. Izany no mampitombo ny tahan'ny NAD + mankany NADH.
Ny sasany amin'ireo fiasa izay mampihena ny NAD +
Ny haavon'ny NAD + ambany dia mety hiteraka antony maro samihafa:
1. Ny fanaintainan'ny sela
Ny fanaintainan'ny aretina mahery vaika dia manakana ny fiantraikan'ny NAMPT sy ny fototarazo tompon'andraikitra amin'ny gadona circadian. Vokatr'izany dia mihena ny haavon'ny NAD +.
2. Ny fikorontanana amin'ny gadona
Ny famokarana NAD + dia mitaky ny enzyme NAMPT, indrindra amin'ny dingana farany amin'ny fizotrany. Na izany aza, rehefa tapaka ny gadona ataon'ny circadian iray, dia mihena ny fototarazo tompon'andraikitra amin'ny famokarana ny angovo ary vokatr'izany dia mihena ny famokarana famokarana NAD + ao amin'ny vatana.
3. Siramamy amin'ny ra sy ny haavon'ny insuline
Rehefa mitombo be ny haavon'ny siramamy sy ny insuline dia miakatra ny tahan'ny NADH / NAD +. Midika izany fa ny habetsan'ny NADH dia avo be lavitra raha ampitahaina amin'ny haavon'ny NAD +.
4. Famoahana alikaola
Ny fikarohana marobe dia mampiseho fa ny adin-tsaina amin'ny etanol noho ny Fihinanana alikaola mahatonga ny fihenan'ny 20% amin'ny haavon'ny NAD +. Izany dia satria ny alikaola dia miteraka fahasimbana mihetsiketsika izay manelingelina ny famokarana coenzyme.
5. Fahasimbana ADN
Rehefa simba faobe ny ADN dia betsaka ny molekiola PARP
manamboatra sy mamerina amin'ny laoniny ny ADN simba. Koa satria ny molekiola
natolotry NAD +, noho izany dia midika fa ny fitomboan'ny fandraisana anjaran'izy ireo
jereo ny tsy fahampian'ny famokarana simika amin'ny vatan'ilay niharam-boina.
6. Hetsika sirtuin ambany
Raha jerena fa ny sirtuin dia mifehy ny gadona circadian, ny fihenan'ny sirtuin dia mety hampandefitra ny fizakan-kery sy ny mikoriana. Vokatr'izany dia mihena ny haavon'ny NAD +.
Misy lafiny vokatr'izany eo amin'ny NAD + ve?
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia azo antoka tanteraka ny fametrahana NAD +. Ny fandalinan'olombelona natao natao hametrahana ny haavon'ny fiarovana amin'ny fisondrotan'ny coenzyme ao amin'ny vatana dia mampiseho fa ny isan'andro isan'andro 1,000 ka hatramin'ny 2,000 mg mg NAD + isan'andro dia tsy nisy fiatraikany manimba ny olona.
Na izany aza, misy tranga vitsivitsy izay itaterana fiantraikany malefaka vokatry ny fihinanana NAD +. Ireo fiantraikany ireo dia misy ny mie, indigestion, aretin'andoha, havizanana be loatra (havizanana) ary koa ny fivalanana
Fampahalalana misimisy kokoa momba ny NAD +
Ny vovony NAD +, izay ampiasaina amin'ny famokarana NAD + dia fotsy, fotsy hygroscopic ary tena be rano. The formula formula of Vovoka NAD + is C21H27N7O14P2.
Raha mpanamboatra voamarina ianao ary liana amin'ny vovobony NAD + ho an'ny NAD + famokarana fanampiny, alao antoka fa hahazo izany amin'ny loharano malaza ianao hialana amin'ny fividianana sandoka. Tokony hanamarina ianao fa miatrika mpivarotra azo itokisana ianao rehefa mividy suplement NAD +. Mariho fa afaka mandefa vovoka NAD + na fanafody fanampiny NAD + amin'ny Internet ianao.
Ny NAD + coenzyme dia molekiola izay manana anjara toerana lehibe amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Ny tombony amin'ny NAD +, izay ahitana ny fahasalaman'ny saina, ny fanoherana ny adin-tsaina ary ny fanamboarana ny ADN, mihoatra noho ireo voka-dratsy vitsivitsy izay mifandraika amin'ny famenon'ny coenzyme. Ho fanampin'izany, ny tombotsoan'ny anti-panahy NAD + dia tsy tokony hifantohana amin'ny alalàn'ny fanampian'ny NAD +. Na izany aza, zava-dehibe ny hahazoana antoka fa mahazo ny vovony Nicotinamide Adenine Dinucleotide / NAD + na fonosana NAD + avy amin'ny loharano azo itokisana ianao.
Anderson RM, Bitterman KJ, Wood JG, et al. Mampandeha ny fahanterana ny sela nokleary NAD + niokleary fa tsy manova ny ambaratonga NAD + maharitra. J Biol Chem. 2002 Mey 24; 277 (21): 18881-90.
Gomes AP, Vidiny NL, Ling AJ, et al. Ny fampiatoana ny NAD (+) dia manosika fanjakana pseudohypoxic manelingelina ny serasera nokleary-mitochondrial mandritra ny fahanterana. 2013 Dec 19;155(7):1624-38.
Imai SI, Guarente L. NAD ary sirtuins amin'ny fahanterana sy aretina. Trends Cell Biol.2014 Aug;24(8):464-71.
Vidiny NL, Gomes AP, Ling AJ, et al. SIRT1 dia ilaina amin'ny fampahavitrihana AMPK sy ny fiantraikany mahasoa amin'ny resveratrol amin'ny fiasa mitochondrial. Cell Metab. 2012 Mey 2; 15 (5): 675-90.
Satoh MS, Poirier GG, Lindahl T. NAD (+) - miankina amin'ny fanamboarana ny simba simba vokatry ny sela olombelona. J Biol Chem. 1993 Mar 15; 268 (8): 5480-7.
Sauve AA. NAD + sy otrikaina B3: avy amin'ny metabolism mankany fitsaboana. J Pharmacol Exp Ther. 2008 Mar;324(3):883-93.
1.Inona ny NAD +?
2.Manao ahoana ny NAD +?
3.Ny tombony / asan'ny NAD +
4.Ny fampiharana / fampiasana ny NAD +
5.NAD + Fatra
6. Ny vokatry ny fianjerana NAD + haavony
7.Hahoana no mampitombo ny ambaratonga voajanahary NAD +?
8. Misy antony iray mampihena ny NAD +
9. Misy lafiny fiantraikany amin'ny lafiny NAD + ve?
10.Mba fampahalalana bebe kokoa momba ny NAD +